Maitiro Ekunze Ekushambadzira Anoyera Sei? | Martech Zone
Isu tinowanzo tarisa mikana yekushambadzira inoonekera zvekuti hatiendi zuva tisina kuvaona. Kunze kwekushambadzira pamabhodhi emabhodhi ndeimwe yeaya marongero. Sezvo nematanho mazhinji ekutengesa, kune mamwe marongero nemikana nemabhiribhodhi ekutengesa ayo vamwe vasingakwanise kupa. Uye ikapihwa zano rakakura, iyo kudzoka kune yekudyara inogona kutopfuura dzimwe nzira dzekutengesa.
Mabhodhi emabhodhi anogona kuve nesimba rakakura kumabhizinesi mumaindasitiri ese. Mune ino infographic kubva Signarama muToronto, zvainyanya kufadza kuverenga kuti muindasitiri yeTelecom ndiyo ine mukurumbira. Ongorora: Izvo zvakare zvinonakidza kuona kuti kambani yemasaini inoziva kukanganisa kweiyo infographics!
Signarama inopa matatu makiyi ekubudirira nekunze-kwemisha kushambadzira kuedza:
Nzvimbo Yakarurama - Tsanangura yako yakatarwa musika, uone yako yakatarwa huwandu hwevanhu, uye tarisa kumatunhu ane hukuru hukuru hweavo huwandu hwevanhu.
Meseji chaiyo - Yakanyanya kuoneka uye yakapfupi mameseji yakakosha. Edza meseji yako padhijitari kuti uwane iyo ine hukuru hwekushandura mitengo usati watenga kushambadzira kwekunze.
Nzira yekutendeuka - Izvo hazvimbokundikana izvo, zvisinei kana chiteshi chatiri kutaura nezvacho, tinogara tichishamisika nehuwandu hwemishandirapamwe inoitwa isina kuyerwa-yekudaidzira-zviito. Billboard kushambadzira ikozvino mutsauko! Sanganisa meseji yakasarudzika munzvimbo yakasarudzika neiyo yakasarudzika peji yekumhara pane yakapusa URL yakavanzwa kubva kunjini dzekutsvaga.
Tags: billboard kushambadzirabhokisibus-stop shambadzokushambadzira kwemotokarihumburumbira bhodhimapikicha epasimega magetsikushambadzira kwekunze kwekumbakushambadzira kwekunzekushambadzira kwekunzezviratidzo zvekunzezvekunamiramijahozvikwangwanizviratidzomadziro ads
Aug 23, 2015 na11: 37 PM
Inotyisa infographic. Panyaya yekushambadzira bhizinesi remuno, mabhodhi uye mamwe ekunze ekushambadzira masvikiro anoshanda nemazvo. Vateereri dzimwe nguva vanobatirirwa vasingazive nebhodhi rebhodhi ravanoona pakati penzvimbo. Zvisinei hazvo, bhiribhodi - kana chero shambadziro yekushambadzira - inofanirwa kuve inokonzeresa pfungwa kuitira kukurudzira mhinduro!